Nyocha Palmitoylethanolamide (PEA) Enwere akụkọ na Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ kwadoro itinye akwụkwọ maka usoro ọgwụgwọ iji gwọọ COVID-19 site na iji ọgwụ sịntetik na-eme ka omume nke molekul dị na wii wii. A na-ekwenye na ọgwụ sịntetik a na - akpọ ultramaronized palmitoylethanolamide (micro PEA) bụ ihe na - egbochi mgbochi. Palmitoylethanolamide (PEA) bụ “nke mmadụ ...
You nwuru anwu anwula ka nká? Ọfọn, ọgwụ na-egbochi ịka nká doro anya na nhọrọ a pụrụ ịdabere na ya nke ịtụgharị elekere ndu gị. Lelee akụkụ dị egwu nke Nicotinamide Mononucleotide (NMN), ọrụ ya na ịka nká, yana otu esi enweta ọgwụgwọ ahụ. Phcoker bụ onye nrụpụta ọkachamara iji mepụta ntụ ntụ Nicotinamide mononucleotide (NMN) Ngwa ngwa ziga ajụjụ: Kpọtụrụ anyị Okwu Mmalite Na-eto O ...
Kedu ihe kpatara anyị ji chọọ Magnesium? Tupu anyị enwee ike ịbanye n’ime mgbakwunye magnesium L-Threonate nootropic, ị nwere ike ịchọ ịghọta gbasara onye bu ya ụzọ. Magnesium bụ micronutrient dị ịrịba ama, nke na-arụsi ọrụ ike n'ọtụtụ usoro ahụ. Ihe mmewere nwere njigide na ike mgbochi na izu ike, njikọ protein, yana ọrụ neuronal. E wezụga nke ahụ, ọ na-edozi shuga shuga ma na-ejigidekwa akuko ọbara ...
Galantamine Hydrobromide nnyocha Galantamine hydrobromide bụ ọgwụ ọgwụ edere iji na-agwọ ọrịa mgbaka nke ọrịa Alzheimer. Galantamine bu ụzọ nweta ya site na snowdrop osisi Galantus spp. The galantamine emeju bụ Otú ọ dị a tertiary alkaloid nke na ya na synthesized. Agbanyeghị na amabeghị ihe na-akpata ọrịa Alzheimer, a maara na ndị mmadụ na-arịa ọrịa Alzheimer h ...
Nlekọta PRL-8-53 Hype nke PRL-8-53 dị ka ọgwụ na-emetụta mmụọ metụtara azụ n'oge 1970s. Nikolaus Hansl, onye prọfesọ na Mahadum Creighton, chọpụtara na ọ bụ nootropic ka ọ na-arụ ọrụ na aminoethyl meta benzoic acid esters. Kemgbe ọ malitere, mgbakwunye a agbanweela otu usoro mmụta doro anya na nnwale mmadụ. Nchọpụta ahụike bụ ihe kachasị egosi na PRL-8-53 maka ịmụ ihe ...
Nlekọta Cycloastragenol Cycloastragenol (CAG) nke a makwaara dị ka T-65 bụ tetracyclic triterpenoid sitere na osisi Astragalus membranaceus. Achọpụtara ya na mbụ mgbe a na-enyocha mpempe akwụkwọ Astragalus membranaceus maka ihe ndị na-arụ ọrụ na-egbochi ịka nká. Cycloastragenol nwekwara ike isite na Astragaloside IV site na arụ ọrụ hydrolysis. Astragaloside nke anọ bụ isi na-arụ ọrụ ...
Nicotinamide riboside (NR) na nicotinamide riboside (Chloride) Nicotinamide riboside (NR) chloride bụ ụdị nke nicotinamide riboside (NR). 1.Gịnị bụ Nicotinamide Riboside (NR)? NR bụ ụdị vitamin B3 ma ọ bụ niacin. Achọpụtara onyinye ahụ na 1940 dị ka ihe uto maka H. influenza. Ná mmalite nke narị afọ nke 21, ọtụtụ ọmụmụ ga-egosi na NR bụ ihe na-aga n'ihu NAD +. M ...
Gịnị bụ Oxiracetam? Oxiracetam bụ otu n'ime ihe mgbakwunye ochie nootropic sitere na ezinụlọ racetam. Ọ bụ nke atọ racetam compound mgbe piracetam na aniracetam na mbụ e mepụtara na 1970s. Oxiracetam bụ kemịkalụ kemịkalụ nke racetam mbụ, piracetam. Dị ka racetams ndị ọzọ, oxiracetam nwere pyrrolidone na isi ya. Otú ọ dị, oxiracetam nwere hydroxyl otu, nke mere na ọ bụ ihe ndị ọzọ ...
Kedu ihe bụ 9-ME-BC? 9-Me-BC (9-Methyl-β-carboline) nke a makwaara dị ka 9-MBC bụ akwụkwọ nootropic akwụkwọ sitere na otu β-carboline. Β-Carbolines sitere na ezinụlọ carboline dị iche iche. Nke a pụtara na a na-emepụta ha ma arụ ọrụ na ahụ mmadụ yana kwa mkpụrụ osisi ụfọdụ, anụ esiri esi, anwụrụ ụtaba na kọfị. Achọpụtara β-Carbolines (BCs) dị ka neurotoxic, agbanyeghị, ọ dị nso ...